steel carbon square & leydi biibiile mashiinka xirxirida ka Teneng HGF200 - Shiinaha Shijiazhuang Teneng
Kurka Line & Cut Si Line Length
Roll Cold U samaynta Mill
Machine xirxirida Automatic
End jeeda & Machine Chamfering
Mashiinka ZJ1800 kurka
Carbon tuubooyin bir End jeeda & Chamfering Machin ...
accumulator Carbon steel muquuninta gariiradda HT76
carbon steel square & leydi Mac xirxirida biibiile ...
HGF200 carbon steel square & leydi pack biibiile ...
Carbon gariiradda steel Haydarooliga double-koorta ahaayeen uncoiler ...
steel carbon square & Mashiinka xirxirida biibiile laydi ka Teneng HGF200
Hordhac kooban oo ku Mashiinka waxaa loo isticmaalaa si leenahay iyo santuuq alaabta dhamaystirtay on line-soo-saarka biibiile. Aan hawlgalka buugan, mishiinka si toos ah waddaa, in hagaagtay oolnimada wax soo saarka badan ee. Waxa ay meesha reebtay buuqa, dhaawac, iyo khatarta ammaanka qarisay, iyo wanaajinaya tayada sheyga iyo hoos u dhigtaa qiimaha wax soo saarka. Si loo daboolo baahida loo qabo in gudaha on qalabaynta ee line-soo-saarka biibiile, waxaan u nuugo dhibic xoogga leh ee qalabka dibada oo u horumariyaan innova ...
Supply Kartida: 5-7 qaybood
Port: dekedda Tianjin
Hordhac kooban oo ku
Mashiinka waxaa loo isticmaalaa in lagu leenahay iyo santuuq alaabta dhamaystirtay on line-soo-saarka biibiile. Aan hawlgalka buugan, mishiinka si toos ah waddaa, in hagaagtay oolnimada wax soo saarka badan ee. Waxa ay meesha reebtay buuqa, dhaawac, iyo khatarta ammaanka qarisay, iyo wanaajinaya tayada sheyga iyo hoos u dhigtaa qiimaha wax soo saarka.
Si loo daboolo baahida loo qabo in gudaha on qalabaynta ee line-soo-saarka biibiile, waxaan u nuugo dhibic xoogga leh ee qalabka dibada oo u horumariyaan cusub. Mashiinka leedahay sifooyinka of technology advanced, isku halaynta ammaan sare, qaab-dhismeedka is haysta oo macquul ah, habka baaluq, iyo dayactirka hawlgalka ku haboon. Marka la barbar dhigo mishiinka dibada, ratio of our mishiinka waxqabadka qiimaha sareeyo.
Previous: ZJ1250 mashiinka kurka gariiradda steel
DB127 Automatic steel wareega & biibiile square p ...
DB76 Steel Round mashiinka xirxirida biibiile
HGF200 carbon steel square & leydi biibiile ...
mashiinka lagu cabayn biibiile square
Semi-auto mashiinka xirxirida biibiile
Cinwaanka:. Xiushui guri nagaadi 1108, No.363 Zhonghua North Street, Xinhua coal, Shijiazhuang, Shiinaha.